Land for Sale in Kamaryut - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Lands for Sale in Kamaryut
Ad Number S-8398993
Land Link Real Estate Close
Ad Number S-8443352
Ad Number S-8446194
(75'X75')အကျယ်၊ ကမာရွတ်၊ အင်းယားလမ်းကျယ် ရှိ ​​မြေကွက်​ရောင်းရန်ရှိ
Ad Number S-8443877
(0.631ဧက) အကျယ်၊ ကမာရွတ်၊ အင်းယားလမ်းမ​ပေါ် ရှိ ​​ ​မြေကွက်​ရောင်းရန်ရှိ
151,000 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8443876
(75'x145')အကျယ်၊ မြကန်သာလမ်း၊ ကမာရွတ်၊ မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိ
Ad Number S-8438507
သံလွင်လမ်း ဝင်ဒါမီယာ မြေကွက် ရောင်းမည်.
11,550 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8433259
(60'x240')အကျယ်၊ ကမာရွတ်၊ ဗဟိုလမ်းမပေါ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ရန်နေရာကောင်း မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိ
Ad Number S-8431182
Ad Number S-8430248
House Book (Myanmar) Real Estate Service Co.,Ltd. Close
💎 ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ အောင်မြေသာစည်လမ်းပေါ်တွင် ထောင့်ကွက် မြေသီးသန့် ရောင်းရန်ရှိသည် 💎
Ad Number S-8421420
(1.275ဧက)အကျယ်၊ ကမာရွတ်၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမပေါ်၊ နေရာကောင်း မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိ
160,000 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8407396
S-00221/ ကမာရွတ်မြို့နယ်/ လှည်းတန်းလူစည်ကားသော/ အင်းစိန်လမ်းမအနီးရှိ/ မြေကွက် (100'×70')ညှိနှိုင်း,...
Ad Number S-8400519